"eey dhaddig" | Cosmos koobi karayn
Posted in caalamka . dembi . naag . Karma . bannaan . jeclahay . nin . wax aan waxba tarayn . Yin a
Ha badbaadin wax songs
hadiyad jannada, hana is qaadqaad jaray dibinta.
Dhinaca kale, adiga iyo limaan,,
Brother, zaprokynuta madaxaaga,
indhaha Half-u xiran yihiin - in?- pryacha.
Brother, zaprokynetsya madaxaaga -
Qaado gacmo dhashay - ku dadaalaya! upryam!
Your qaylada habeenkii oo dhan u noqon doonaa Gobolka Up!
Rastreplyut baalashaada dhammaan afarta dabaylood!
- wada jeclaada xigmad – waa Naciimo. Jacaylka aqoon ama aan xigmad lahayn – xanuun this …© vkontakte / guru108
bulshada Dhaqanka, rogo sharciyada iyaga u gaar ah, Waxay abuurtaa noocyada cusub ee cudurada neuropathic adag. doorbiday, halkii ay ka daaweynta sababaha cudurada jira, noocyo cusub oo cudurada nafsiga ah. Mid ka mid ah kuwaas oo aan caadi ahayn nafsi polysyllabic waa cudur “Dogs dhadig”. haweenka, ayaa keentay in ay ku ciyaaraan fashion, dareen la'aan, xayirmay dab bulshada, kaas oo ka gubtay for dhimanayaan jidka. jilaa A kulan ee bulshada ku sii iyaga u gaar ah “eyga” kelinimada. dugsiyada Medical door bidaan ma in lagu daaweeyo noocyada cilladaha nafsi. Maxaa yeelay, iyagu waa waxtar u leh ilaalinta ee qaab-dhismeedka pyramidal bulshada ee qalabka. Ka dib oo dhan, waa mahad iyaga in bulshada ay sii socoto hirarkii olol xanaaq iyo carada leh jinsiga ka soo horjeeda, in milkiilayaasha hay'adaha awoodda gacanta.
cudurka “Dambiisha” Waxaa laga soo qaadan karaa meelaha la shancosbitaal ah dareenka iyo gariirka kale dareen. In arinku u hureen, sababtoo ah aqoon korodhsiga ka dibna la siiyo dayacaad ah “rajada”, waxaa laga yaabaa in ku xayiran, oo zasosot iyaga oo qoto dheer. Just si fudud, foomkan cudurka laga yaabaa in boogaha dareenka sabab ma ay bogsan. Waa kuwee wuxu lahaa bixitaanka tartiib cudurka ee dusha.
isagoo, Gaadhista cudurada, Waxa uu bilaabo inuu soo ururin ku wareegsan tiro badan oo u khuduuca jinsi ka soo horjeeda (tiro aan xad lahayn) iyo melo gol leeyahay in lagu gaysto boogaha, inta badan wadnaha, ama ka dhigi excruciatingly daran. Isla mar ahaantaana waxa uu u adeegsanayaa technology isla, hogaamiyay eyga dumar ah inta lagu guda jiro kulan galmada.
uun Separate durto kartaa marmarsiiyo kasta (caadi ahaan la xiriira ama saaxiibtinimo) in koox dad ah, codsiga ku xiga ee nabarrada dareen qoto dheer xubnaha kooxda ugu arinku, codsiga ah taas oo lagu sameyn doonaa shakhsiga ku saleysan qarsoodi ah ka dadka kale ee. Si aad u muuqan sida laga abuuray muuqan kartaa in labo ka mid ah uun ka mid ah galmada ka soo horjeeda.
Sharci iyo DNA.
In times Imperial waxaa jiray sharciga ah ee Russia, taas oo hal maalin toddobaadkii ayaa waxaa si gaar ah loogu talagalay dumarka. Haweenka jidaynayey tegey sida Xariir, iyo qaar ka mid ah ayaa weli u tagaan. Если же мужики по каким-то причинам забывали это делать - их бабы бесили, oofiyey, Waxay sameeyeen sidii ugu fiican, in rabshada ay cinwaan u gaar ah. Waqti ka, gacmaha dadaala oo colalkii shisheeyaha sharta inay codsi ka lumay sharciga sida a, iyo, xataa, keenay xaaladda ka hor, in la saxo oo dhan suurto gal babьeй xitaa Waxa ay ahayd mid sharci darro ah. Tan iyo naagtii jecel yahay si aad u hesho dose of a “daawo” Heerka DNA gundhig – erayada kasta haddii ay taasi ku jira aan waxtar lahayn. Sidaas darteed, dad badan oo “Mudanayaal” Kolkaasay bilaabeen inay ku hardiyi rabshadaha ma aha oo kaliya nimankooda, laakiin oo dhan gacanta ku soo hoos dhaceen. Waxaa jira statistics in 60% haweenku ay doonayaan in la kufsaday. Oo waxaas oo dhan sababtoo ah kaliya, in lagu sameeyo isbedel arrin aan qiimo lahayn in “sharciga”. Thanks to kuwaas oo rag kuwa, taas oo oofiyey mar hore ku filan, lagu qasbay in ay ku garaacday kasta snouts kale ama liqi wadnay sun hoos marmarsiiyo aad shaki ku rajo ku bogsiiyaan wuxuu heli nabarrada.
In lagu dilo nabro sida ku filan si ay u muujiyaan is waydaarsiga habboon marka la eego halka uu cuncun.
Waa in lagu daydo war, rabshada ka dhanka ah haweenka, ku jira xaalad ah jacaylka hooyada, Waa dembi, vyshibanie nacas ah haweenka bitches – waa caafimaadka. sal-dhigida ula kac ah qof dumar ah oo caadi ah galaan xaalad ah “Dogs dhadig” – sidoo kale denbi ah taas oo ku tiirsan qiyaastii caadiga ah ee malab. caawin.
bilaabay cudurka laamood, horumar sii, Waxaa gaari karo mid ka mid ah foomamka xad dhaaf ah, kaas oo lagu sheegi doonaa in xiriir qaniis yahay. From oo waxaa soo socota in cudurka kala qaado ma aha oo kaliya “dumar ah” laakiin sidoo kale “labka”. Tani waxay kicisaa walaac dheeraad ah, sababtoo ah waxaa macquul ah ee shaqsiyada kala ah bisexual. xayawaan, cudur ayaa gaaray heerka ugu at, Fogaanta dhexdeena ka is-daweyn, hoos ka nidaamyada caafimaadka ee caadiga ah.
cudurka Tani waa mid aad u faa'iido ma daweeyey daatay dadka la rabin ama tartanka oo dhan. Fikrada ah farax sida xanuun dalka caafimaad ama dhalashadiisa waxaa qoray talogelin badbaadiya oo tallaabooyinka caafimaadka.
Sababtoo ah baahida daboolin ee DNA waxaa leexashooyinkaasi ee jirka ka mid ah jidhka dheddiga, in dadka kale naftaada ka daawan kartaa aamusnaan ama u guuraan on iyaga u gaar ah “maqaarka”. Si aad u kordhin horumarka cudurka waa mid aad u muhiim ah in la kala qaybin farabadan hal Yin-Yang iyo iyaga diidi awood u leh inay kala xaajooto. tusaale ahaan, heerka “sharciga guud” diidina “yaroow” qabsato ay falsayeen “bunadem”, iyo waqti isku mid ah “Baba” siin dillaaliin in ay, iyo masuuliyada ay qaladaad ka go'an iyaga by jiifay on garbaha “ragga”. tamarta la xakamaynin Yin, vlyapyvatsya oo isku xigta ay bilaabaan oo dhan, haddii dhacdooyinka dhici on the Planet of Death – Hadday jireen daldaloolo Dhimashada (ugu yaraan waxoogaa yar). A, haddii badh dhinto – qeybtii labaad aad uga taagta daran oo heshiis la fududaan doonto. Sayidka waxaa suurtagal ah taasi oo ka sharabaadada panty iyo baabbi'in dhan Race.
Mid ka mid ah noocyada ugu daran ee cudurka jawaan Waa isku day lagu dhufan, Isticmaalka warbaahinta, tusaale ahaan, baahinta. Zarazhёnnыe qof, isagoo sameynayo jireed ugu yaraan, isticmaalaya u qalmidda ku sii qaab, ka go'an inta lagu guda jiro toogashada falalka noocaas ah, in sababta gardarada ama jeedasho leh daawadayaasha, la jidhka sababaha. Tani waxay awoodi karin cabiraada 1aad walax, kaas oo noqon kara hay'adaha, haddii ay ku andacoonayaan in aan caadi ahayn nafsi haysan. laakiin, haddii ay ku sugan Adduunka, taas oo waa ka fog tahay in la koray – sidaas daraaddeed waxay u kala eryay oo ka Caalamka hoose. Tan iyo markii ay Caalamka cusub naftooda, ay ma keeno wanaagsan, halka samaynta isku dayaya in ay soo bandhigaan kala daatay ee dunida sida xubno ka Cosmos ee – iyagu ma loo baahan yahay, ma aha oo kaliya in Caalamka kuwa, laakiin dhammaan Cosmos koobi karayn. Ogolaanayo in ay la eedeeyay malab caadiga ah. caawin.
wakiilada qaarkood waxay door bidaan in ay naftooda ka fiirsan Wajiyada badan. tusaale ahaan, berri – iskuulka lagu dayan karo, ardayga ama agaasimaha (boorriyay oo dhan, in ay si hufan ay tani tahay); qadada ka dib – halyeeyad “Santa Barbara” (madadaalo); iyo fiidkii – Hogaamiyaha taxane VIP qaawan (laftiisa ma awoodo in ay ka gudbaan ku). Sidaas daraaddeed waxaa jira tusaalooyin “shaqsiyad Semiconductor”, taas oo kala duwan for muuqaalka kasta oo xaaladda. hab nololeed Kuwaasi. Oo intaas oo dhammu xaaladaha caafimaad ee cudurrada ka waalan, waayo, taas oo ku tiirsan dose caadiga ah ee tallaabooyinka caafimaadka.
Waxaa jira xaalado dhabta ah, Qof dumar ahuna markay timaado in booqasho in cutubyo ciidanka in mid ka mid ah u jeclaaday oo aan iyaga u gaar ah u leeyihiin in ay halkaa sii joogo muddo bil ah ama labo. Her jecel yahay mid ka mid waqti this waxaa laga yaabaa in ay ku jiifsatay booraan la god dhaladii. Ka dib oo dhan, ciidanka waa wax caynkaas ah: Qaar badan oo ka dhiman on baridda. Waxaa laga yaabaa in kiisaska, mar qof snot a calalinta dhow qol kale, halka asxaabta yihiin oo burburiyey aasaaska nolosha saaxiibtiis. inkastoo, haddii loo baahdo, si fudud ugu yeedhi laga yaabaa qof ku haboon adeeg ciidan, taas oo ku hamiyo iyo ku faraxsan in ay. Qaar ka mid ah la socotay, in la arko dad spineless iyo Muslimiinta in ay ka Cabsan inay hub iyo, sii wadaan horumarinta jihada this, fadhiya booliiska, in ay rabshadaha ka dhanka ah dadka aan hubaysnayn: dugsiyada, ardayda dhaddig, haweenka. Waa in la ogaadaa in “sharciga” Waxa kale oo ay kooxda. Ka dib oo dhan,, waxaa jiri kara daafaca dambi ah si ay dadweynaha? dembiilaha – mid ka mid ah kuwaas oo ka fallaagoobay xildhibaan ah, laakiin ma aha mid ka mid ah kuwaas oo dhaawac anoo addoonkaaga ah kuwa is-hoosaysiiya. In this, wax kasta oo codsi in ay maxkamadda ka addoommo ah waa la diidi doonaa iyo jees jeesi (in ay sii wadaan inay iyaga u adeegaan ma fekerin). “sharciga” had iyo jeer waa xaq! In this isagoo fikrada ah noocan oo kale ah la kufsaday ayaa la xukumay ka saarida ka Universal ee, of space iyo intii caalamka ku nool oo heli mamnuucidda on xaq u dhalashada. taas oo u dhiganta Heerka sida malab. caawin, qiyaas caadiga ah ee hawlaha madadaalada, iwm. isu ekaysiinta.
gudbikaraa oo ka mid ah adeegyada saaxiib.
Xeerka shuruud inta badan kor u gudbikaraa oo ka mid ah adeegyada saaxiib, maxaa yeelay, dadkii kuwaas oo had iyo jeer dambiilayaasha iyo had iyo jeer eed, kaas oo u ogolaanaya hay'adaha sharci fulinta in ay waxaa lagu soo rogi knim waqti kasta oo dhanna qaado, waxa ay u baahan yihiin. Sayidka waxaa suurtagal ah si aad u hesho macluumaad ama ka dhigi booqashooyinka ujeedooyin kale.
abiturientki badan oo arinku, ardayda, gabdhaha ku dhicin arrintan ay bikirka iyo gullibility. Waa dhici kartaa, ay ka saari doonaan guryaha via ad wargeys, oo naagtii waxay ku danbe ugu yeedho in ay sameeyaan ganacsi oo saaxiib. (“ka dib oo dhan iyo naftooda taageeri iyo caawin waalidiinta, iyo in ay, wax walba waxa ay mar horeba ku hawlan, laakiin aad. nagu soo biir”. si fiican u, iyo xataa leexdo xagga dhillo, laakiin hadalka ku saabsan muhiim ma aha.) cadaadis ama rabshada loo isticmaali karaa si xun, iyo haddii qof doonayo inuu ku lug leh shaqo sida – waxaa laga yaabaa in ay halis gelin, in dhammaan waalidiinta sheegi doonaa. goobada Sayidka buuxa: addoommo addeeca mar walba faa'iido. fikrada tiirsan malab caadiga ah. caawin.
xayawaan, ku hawlan inay iskood adeegyada galmada waa in ay qaataan ku ganaya on foodda jidka ay shaqo u gaar ah iyo sumadda dokumantiyada shaqsiyeed. Looma ogola in ay helaan waxbarasho sare.
Sofia – xigmad.
Naag kastoo uu yeesho si waafaqsan ay caadiga ah ee, laakiin tixraac caadi ah naag kastaana, oo ku yaalla Gray Eoni, waa Sofia – Mira hooyadii. Qof dumar ah oo waa inay awoodaan si ay u noqdaan dheeraad ah oo heer sare ka badan Sofia oo kaliya in ay dhacdo, haddii la gaaro ka adkaan doonaa heerka of Wisdom Sophia cillad ama ha la heli karo isaga in. ilaa markaas “War dumarkii oo dhan waa nacasyo”. inkastoo, Waxa jira aragtiyo 2% haweenka, ma ku xiran yihiin cudurka Sofia.
dheddigga Promudrevshie door bidaan inay la xiriiraan iyo ku lug leh galmada sababo aargoosiga, masayrka, nacayb ama xanaaqa, runta, kufsi More macquul ah, xaaladda this sidoo kale iyaga ku habboon. In wareegyada ay aad loo jecel yahay madadaalada nacasnimadu sakhraan. Ka dib markii taas, waxaad mar walba dalban kartaa:”Waxaan ahaa cabbay.”
dheddigga xukuma door bidaan in la siiyo fursad in la raaco baabuur for more, by cajiib ah. Oo joogitaanka iilan buka siin marka loo eego dhaqanka isla. Marka cudurka waa u qalmay inay ku walacay – Khadadka dhaqanka khalad ku xiran yihiin ku dhowaad dhammaan.
The xukun qoto dheer ugu horumarsan, in dadka dunida jooga waxaa ay gacanta ku xakameeyo taranka labka ah.
Waa in la ogaadaa, in ugu khatarsan waa naagtii, taas oo u aragtaa falsan.
Waxaan noqon karaa…
iska “eey dhaddig” Waxa ay noqon kartaa oo keliya, haddii la qasbay in ay is waydaarsiga on qayb ka mid ah qof dumar ah oo caafimaad leh. Currently, waayo, qasti kasta oo nabad waa caawimaad aad u deg deg ah “dheddigga smart”.
dayacan – Qaabkan ah meydadka sababaha baabba '. Iyo sidoo kale qalabka kufsi qarsoodi ah, kaasoo noqda suurto gal ah ay sabab u tahay codsiga ah ee ashkhaas boogaha maskaxda, kuwaas oo aan weli la burburiyey by jidhka sababaha. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka farsamooyinka sida ma aha kufsiga, laakiin keliya ujeeddo ah meydadka sababaha baabba '. Taas oo u dhiganta ku dilay qof, Haddaba sida jidhku mid ah dilka waa dembi xitaa Sharciyada shuruud. Tan iyo jidhka sababaha ka mas'uul ah shaqo ee qalbi – xayawaan, loogama qaadi of add ku, Waxay matalaan labada biorobots golems; dhab ahaantii tihidiin mar dambe aadanaha. In sida wax u dhigma in dilka qof.
Habka ugu muhiimsan ee codsiga farsamadaa waxa ay ka kooban tahay in qayb ahaan ama af badan shakhsiga dulli nugul cadaadis. tusaale ahaan, cay ku saabsan dharka, muuqaalka ama heerka bulshada. Haddii qofka weli jidhka sababaha – waxaa ka jawaabi karaan, gaar ahaan, haddii jidhka sababaha waa wax xoog leh. (iyadoo jidka ag fadhida, on mabda'a isku mid ah loo dhisay oo dhan kaaga dhirfiyeen kale.) Sayidka detract saameyn shay, waxaadna ku gaari kartaa natiijada la doonayo. qofka la kashifay laga yaabaa in doonayaa in aan cadeeyo dambi ah, in dhammaan ma aha sida uu leeyahay, iyo natiijada ka heli dhibaato, ka dibna lumin xiisaha isgaarsiinta iyo nolosha, dili nafteeda. Iyada oo killers sida waa in si gaar ah u dhaqmaan.
Pikaporstvo – nooc ka mid ah leexashooyinkaasi ka waalan, oo waxaa laga yaabaa in loo soo bandhigin dadka dhalinyarada ah, sababo kala duwan. Pikapory – shakhsiyaadka maskaxda ka jirran ee labada jinsiba, inta badan, iyadoo aan caadi ahayn lagu dhasho, kuwaas oo cudurka “eey dhaddig” gaadhay marxalad final. Haddii aan caadi ahayn lagu dhasho – miyirka ee qabka noocan oo kale ah waa barnaamij macluumaad ah, abuuray by shisheeyaha dambi ujeeddo ah ruuxaxa jinsiga ka soo horjeeda, xanuunada dhexgalka habboonaanta u dhexeeya ragga iyo dumarka, sii kordhaya heerka of gardarada bulshada iyo ballaarinta ee Qaranka ama tartanka oo dhan. In si kale loo dhigo, uun noocan oo kale ah run ahaantii waa barnaamij aan jirkooda sababaha kasta. fursadaha More waa Maydho suurto gal u habaynta: adhaxda qaar ka mid ah chimeras, marka shaqo ee hirka sare nafta waa la gooyay ama baabbi'iyey, oon loo diiday qof kasta oo horumar dheeraad ah, kaasoo noqda suuragal ah keliya marka remelting. All artist lagu dhasho qaado waxaa loo doortay tallaalka caadiga ah – haray in la dhalaalay.
ku dhowaad dhammaan dhadig, kuwa caqliga leh si kalsooni leh u qaato booska xiriirka jinsiga ka soo horjeeda, in uu yahay, in nin waa in 30 sano: si ay u 30 sano ayaa wax ay ka gaaraan. Noocan oo kale ah hore u awoodi karin in ay content 18 sanadkii Princess ama Princess. laakiin si 30 sano nin weyn oo dhan in loo baahan yahay iyo sidoo kale a dhicis Suurka. By kugula wixii aan faa'iido leh “shakhsiyaadka caqliga leh” loo arkaa ma loo baahan yahay oo dhan, iyo abaal marin u hesho lacag la'aan ah dose of tallaabooyinka caafimaadka lagu badbaadinayo. Sida waayo, ragga aan caadi – iyaga ka mid ah oo aan hadalka at dhan.
dhacdo aad u qalloocan ee dhibaatoo maskaxeed – “snotty” xiriirka labada dhinac, asalkiisu ka soo jeedo ee la xidhiidha isku day bulshada aadanaha bulshada xoolaha ka dhigi doonaa sida stage transit ku wajahan biorobots bulsho. Professor kala duwan maskaxda dadka xanuunsan door bidaan in ay soo wac xayawaanka sare. kooxaha qaar ka mid ah dadka dunida ee la wadaagto fikradahooda. Waxaa si fiican u muujinaysaa waxa xayawaan sida uu yahay xayawaanka. Xaqiiqo ma aha contestable, maxaa yeelay, waxay ka fikiraan naftooda xoolaha.
sidayaal badan oo ka mid ah cudurka bitches ku fashilmeen in ay maqsuud faa'iidooyinka ku salaysayn khalkhalgelinta jinsi ka soo horjeeda, iyadoo fikradaha account bulshada xoolaha, jeestay in kala bar ka soo horjeeda ee ay beerashada u gaar ah sida a “Bakeyle, shaabadood, morkovochek, sunflowers”. taas oo, shaki la'aan, fududahay in la isku dubaridi badan iyagoo ka caafimaad qaba. Oo weliba, xayawaan, riixaya cay kale dadka kale ee ku andacoonaya of xiriir, diidaan xuquuqda xayawaanka caadiga ah si ay isu noqon. In si kale loo dhigo,, noqdo ma cadda kuwa xoolaha, Oo waa ayo ninka.
uxuu, riixay kasta noqon soploy ama samayn sharci darro ah ee la xiriirta falalka xoolaha, soo dhaweynta qoray talogelin caadiga ah – oo dhan nozzles on diinta.
sariirta – ubax.
waxaa jira kuwa Dhadig, kuwaas oo si joogto ah u qaadan on ubax iyo bogaadin qaar ka mid ah, ee mugdiga galinaya jidka u dhimanayaan, iyo been kale deg dega ah ee sariirta. Ka qaybgalkooda waa mid aad u fudud: waxay xad lahayn u dhaqmaan – ka dibna ku dadaalaan in ay ku nool yihiin dunida aan la hubin.
dheddigga badan oo xukuma sugayso soo jeedinta ka addoommadii diyaar ugu qaalisan. Laakiinse ma ay yihiin oo keliya – sida haweenka sidoo kale, oo waxaa loo arkaa celceliska ah, Waxa loo isticmaalaa si ay u taranka, inkastoo qanacsanayn ismaqalkii, had iyo jeer xaq yahay falalka ay kufsiga gobta hodan:”Waxa uu ahaa awoodaan inay sameeyaan sida soo horjeeda kuwa kale.” Xaaladdan oo kale, iyada oo aan geli faahfaahinta, in kale – dadka caadiga ah, iyo “sayidkaygiiyow” – xoolaha ama biorobot ma meydadka sababaha, mas'uul ka ah niyadiisa. In category this sidoo kale dhici dhadig, xiriir joogto ah la “iyo amiirro,” oo inta badan ku majaajiloodeen jira hoos ku dhisaalan sheegashooyin kala duwan.
Waxaa jira dhaqan fiican oo la aasaasay: in Yeeyi Cunto ido cuno, iyo bakaylaha waxa ruxay duurka u. Obayasneniya aan loo baahnayn.
Maadaama uu, in dacawo this ee dheddigga ma yeeshaan si waafaqsan shuruucda Caalamka, halkaas oo Love ugu weyn, doorbiday in la iibiyo, waayo, dhex-, Wakiil rumowdey xaaladaha sarrifka – ay u baahan yihiin in ay u guuraan meel la xiriira gariirka ay: dhaqan kajirin ka baxsan caalamka. Muxuu noqon doonaa filan si ay u abaabulaan Sadaqaysta iyo madadaalada duulaan medikomentoznuyu la ujeedada tixgelinayo sifooyinka gaarka ah ee noolaha ku lug leh.
Haddii aad tahay uun caadi ah – ha ka baqin in aad iskaaga u noqon oo waxay ku jeclahay, in aad u jecel. Daacad la ashkhaas daacad ah. si sax ah u dhaqmaan la ashkhaas caadi ah, aan caadi ahayn oo gargaar u dhaqaaqo rugta Space.
net The biyaha Cal had iyo sabeyn in ay dusha sare. In this, isku day in aad meesha ka saaro suurtagalnimada in lagu dedijiyaa dhexdiisa,. ugu xumaa – haddii saxarada this awoodaan in ay jebiyaan galay noloshaada, oo gurigaaga tag noqon doonaa, marka uu doonayo. Laakiin waxaa fiican inaad ka fogaato taabashada dhismeedka kuwaas oo shabaggii biyaha iyo codsan, haddii loo baahdo, hawlaha la xiriira.
Space dhammaadka lahayn Ma doonayaan in ay ka qayb qaataan horumarinta ashkhaas kuwa, diiday fursado sida marka qabashada on iyaga u gaar ah oo la Space koobi karayn, curin nafsaddiisa. makhluuqaadka sii wadi doonto joogitaankeeda waa Cosmos iyo xad la'aan, beddelo qaabka jiritaankeeda oo dhinaca kale ah.
PS. Sofia, Dabcan, Waxaan u baahan tahay caawimo. malaha, waxaa buux xilkiisa, si ay u aado fasax, si ay u galaan shaqada ka sii fudud oo farxad leh, связанной с воспитанием своих детей, а её Эон переходит в подчинение Богине Плодородия, xigmad, iimaanka, rajaynayaa, jeclahay, Света и Святого Духа (в реинкарнации Valentine). iidaha Quduuska ah iyada oo sharaf waa in loo dabaal 10 December, 8 August, 18 August, 30 September, 8 October, 8 November.
Waxaan aad rabto oo dhan farxad, Sveta iyo jeclahay.
1. Pesnyary - Love A sida riyo oo kale
4. sahan Kwnst – Happiness @ ru
Весьма любопытна возросшая активность по схожим темам. sida muuqata, это действия людей, легко подвергающихся внешнему воздействию. Которое было организовано тем, кто боится появления ближайшего Будущего.
Нет сомнений в том, что женские мужчины виноваты в том, что женщины такие. Прочтите внимательней: об этом вполне конкретно говорится, даже с описанием того, почему они выбирают именно таких мужчин. Еще можете почитать “революционную историю” iyo, ma laga saaray, что вас озарит: почему именно такой тип ДНК и сознаний прижился.
И где вы тут, guud ahaan, увидели, что речь идет о женщинах? В этой теме рассматриваются “Dogs dhadig”, и немного их “Кобели”, которых тяжело назвать мужчинами.
такое впечатление что автор этих строк – женоненавистник: dhadig. особи женского пола и т.д.. какими бы они ни были. настоящий мужчина не будет так о женщинах отзываться. имхо
Если понаблюдать немного за поведением «Самок Собак» — то в результате научного эксперимента можно установить, in ay ragga neceb.